एमसीसी प्रकरण : सभामुख सापकोटाले दिए प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ! - Nepal Suchana
एमसीसी प्रकरण : सभामुख सापकोटाले दिए प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ!
April 18, 2021 Views: 80
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो सत्यतालाई कसैले तोड्न नसक्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पदस्थापन कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले देश र जनताको हितको पक्षमा काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।
शनिबार बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव सभामुखले रोकेको आरोप लगाएका थिए । सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्बन्धी विधेयकको प्रसंग नभने पनि आफूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताए । कसैले काम गर्न अवरोध गरे रोक्न खोजेपनि नरोकिने बताएका थिए ।